10 nezvemaitiro kukura crypto indasitiri mu 2018 - Blockchain News
Ndira 21, 2018 arun
10 nezvemaitiro kukura crypto indasitiri mu 2018
nyanzvi kubva The Element Group vakaongorora regore rakapera Crypto-kumusika uye kuudzwa gumi dzinoitwa kukura maindasitiri ichi mugore idzva. Ivo pfungwa, maererano Muchiitiko, zvimwe zviitiko munyika crypto angatanga, kutanga yatiri kuchengetwa 2017.
1. Kugura hombe Crypto Exchange
The kufarira crypto-mari vaityisa mukupera 2017 mushure vakawanda vanoshandisa itsva crypto-Exchange. Nokuda kwaizvozvi, ari Bittrex, Bitfinex uye Binance exchanges vaifanira kumbomira yokunyoresa vanoshandisa itsva, sezvo nhamba mafomu vakapfuura hwokugadzira nezvaanogona ari nzvimbo.
Nokuda mukuru vade mu 2018 vatambi vatsva vachauya kumusika, vazhinji vavo, Ungangove, havazofaniri zvikwata zvazviri simba uye ruzivo. Hackers usarasikirwe mukana tione kuti kubatsirwa mune vechiduku makambani. Zvinogonekawo kuti mumwe makuru vatambi vachaita kubatwa mvumo, nokuda shoma operative mitemo uye kushaya ngozi utariri kwezvivako.
2. Neramangwana riri Cryptocurrencies, zvakawanda zvokusarudza, paumbwe crypto-mari ETFs
Chimiro neramangwana zvibvumirano kuti bitcoin yazova musoro uye zvakarurama nyore mhinduro kuti cryptology. zvibvumirano akadaro anokwezva zvemari mudziyo kuti kunowedzera liquidity vokutanga crypto mari. Kukura mirayiridzo iyi, chekutanga, chinyakare vanoita vanofarira, vasina kupinda kriptonok nokuda yakakwirira njodzi. Uye kufunga kuti hondo pakati CME Group uye CBOE Global Markets akaita ikava rudzi chaiko musoro rokutanga Stock Exchange chipiriso bitcoin neramangwana. mu 2018 tichaona nokuwedzera kwenhamba zvinhu zvemari kwakadaro.
With crypto-mari ETFs (nhumbi pamusoro Stock Exchange), zvose zvikuru kuoma. Pasinei nokuti pakutanga matanho mirayiridzo iyi vakanga akatowana gore rapera, zviremera zvemari vakawanda inoti havasi vakagadzirira kutsigira mari nemhaka yokusava mutemo kriptonka kwakadaro.
Asi, muna June 2017 sangano Swiss Crypto Fund AG akazivisa kushanda munyika yokutanga-siyana crypto-mari Fund. zvisinei, nhau kusunungurwa kambani chinosimbisa kuti mari iyi haisi ETF, sezvazvakaita pamusoro-the-pakaunda uye nechinangwa chete panguva dzakakodzera vanoita. Panguva imwe, ari Chicago Exchange of Options CBOE wakatumwa kuti US kuchengetedzeka uye Exchange Commission (SEC) fomu kushanda matanhatu BitCoins-ETF.
3. Misa nokururamiswa altcoyins
Sezvo vachiti, cheaply akamuka – nyore akarasika. Zvino pamusika pane vazhinji crypto-vanoita, ari nemigove mumabhizimisi izvo pane illiquid maturo mari. Mari idzi dziri vaiwanzotiudza pamusoro diki wemari exchanges dzisina mikana. With vakawanda nokururamiswa pamusika, izvo, semuyenzaniso, tange kuona kuti ekupedzisira mazuva mashoma, vanotengesa Mari dzakadaro haangaoni vatengi, Vachatarirawo upi nzira yokubuda, zvikaguma recalculation uye shandurudzo of altcoy makosi.
4. Nanganai mutemo Mapoka Sales
The December kwezvaizosarudzwa naIye SEC kumisa ICO of Californian kambani Munchee uye kumanikidzira kuti mudzorere vanoita’ Mari yaiva danho rinokosha mukusika mirayiro murau nokukanganisa. Sachigaro SEC akatiwo zvino basa iri kushanda iri kutanga gwaronhau ICO uye nzira itsva yokudzora cryptology. zvirongwa izvi zvinogona kuva kare zvechokwadi gore rino.
saka, regulators achaita kurwisana musangano pamusoro Pump- uye marara-zvirongwa, Insider zvokutengeserana uye zvimwe kuedza kutsausa kriptornke.
Nokuti kuti cryptology ndiye wokutanga pose zvechokwadi uye dzakawanda ezvinhu rusina miganhu, uchava dzinonakidza kuona migumisiro pamutemo kuedza kwakadaro.
5. The chidzoke mabasa kuti masangano vatambi
Kusavapo zvetsika basa rinobatsirwa munzvimbo dzakadai kuitira utariri nehurongwa, chizvidavirire Software, depositories, uye mamwe mabasa anodiwa nevanhu pamusika, kunotadzisa zvechechi vatambi kupinda cryptology. Kamwe yakavimbika nekusimba mhinduro zvinowanikwa nezvipoka izvi, njodzi dzakawanda chokuita nyika crypto haangazodzingi tyisidzira vanoita huru. mu 2017, ivo voga mabasa akadaro vakatanga kuonekwa pamusoro kumusika, asi gore rino vachida kuratidza kushanda kwavo kana vachida kukwezva zvechechi vatambi.
6. Kubudirira vatengesi achavaponesa zvavo unyanzvi
Gore rapera, takaona zvakawanda nyaya kubudirira kubva crypto vatengesi. Zviri ikozvino pachena kuti kwemari yakanga kazhinji kuti nokuda kukura pamusika rinomutsa akanga overheated mu 2017, pane nomumwe mano. Vechikamu pamusoro cryptory ichatanga kutsvaka runziro uye kufunga machengeterwo, nekuti vane rombo bedzi havangavi kuhwina. mu 2018, nyanzvi, kwete rombo ndivo, achakwanisa kuti yakakwirira mari.
7. Inosimudzira volatility nokuda neramangwana riri crypto-mari, mikana, uye crypto-mari ETFs
Mangoti zvinhu zvemari zvakadaro vanotanga kuva akakurumbira pamusoro cryptology, ticharamba pakarepo kuona kwavo simba rakakura zviri kuitika. Sezvo kunyange chinyakare pamusika wemari kanoverengeka gore pane volatility simba, nokuda zviitiko rizivikanwe vatambi vose vanosonganirana zviridzwa zvemari rinobva.
Kana krypton, ipapo achawedzerwa volatility pano, kunyanya kana neramangwana nemamwe nomukaka dzakavharika, kana rebalancing achava zvakafanira.
8. Tichaona kuti kanenge imwe chinyakare mubhizimisi-bhuroka kambani anoenda kusauka somugumisiro sizvo kurapa crypto-nomukaka
Pasinei chokuti kare pane nomukaka musi Bitcoin dziri neramangwana, mumwe Musakanganwa kuti chombo ichi chinokosha kumbooma ichishanda. Mumwe kutengeserana kundikana kana zvisiri mutsetse remitemo kunogona kukonzera irreparable kukuvadza kuti kambani, risina ruzivo kushanda crypto-mari.
9. Cryptomarket rinotungamirirwa nomudzimu kwepfungwa
Nezvemaitiro cryptology kazhinji nemhepo boka kunzwa kuti anogona kukonzera muzvinashawo kudavira kuti anogona kumhanya kumusika kuburikidza network. Chikuva akadaro nokuti kutaura pfungwa yako uye mhanza shoma anogona kuita zvavo investor anzwe invulnerable. 2018 kucharatidza kuti kumusika iri kutongwa Insider ruzivo, uye kwete pfungwa imwe muzvinashawo uye vateveri vake.
10. Cryptocurrency muna Fiat
The kushaya kwakaita crypto mari muna Fiat ari kusimba link iri crypto indasitiri. exchanges Most zvinopa panogumira $ 100,000 pamwedzi, uye chete zvakakwana rukasimbiswa vanoshandisa. saka, cashing cryptosaving wako akaomesesa, uye Tether pano haazorambi kubatsira. mu 2018, vatambi vazhinji cryptology vachava kufarira nekugadzirisa dambudziko iri. Uye zvichida kuti gore rino mabasa matsva kuchatanga dzinowanika mumusika, kupa rubatsiro nokuti kushaya kuti crypto-mari mu Fiat.
Previous Post:Chii Bitcoin Core uye chii chavanoita
Next Post:Blockchain News 21 Ndira 2018